Hii Jaankuyiin 'qaccee sanyii daa'mmanii yeroo jaqabaaf natu gulaale' jedha - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Yunivarsiitiin Hii Jaankuyiin qorannoon isa inni jedhu hin beeku jedhe
Saayintistiin Chaayinaa seenaa keessatti yeroo jalqabaaf qaccee sanyii ijoollee isa dura turerra sororsuun foyyeesseera jedha.
Kora dhimma qaccee sanyii ilaallatu Hoong Koongitti adeemsifameen Heejaankuyiin qaccee sanyii daa'mman dubaraa lakkuu jijjiiruun akka isaan HIV walitti hin dabarisne taasisuu kooti 'nan boona' jedheera
Hojiin inni dhiyeesse kuni garuu hanga yoonaa hin mirkanoofne.
Isa inni qaccee sanyii nan gulaala jedhu saayintistoonni baayyee balaalefataniiru. Hojiin qaccee sanyii gulaaluu kuni Chaayinaa dabaltee biyyoota baayyeetti dhorkameera.
Yunivarsiitiin Saayinsiifi Teekinoolojii Chaayinaa Sheenzen ''waa'ee dhimmichaa 'quba hin qabu nan qorachiisa.'' Hiin ji'a Guraandhala irraa qabee boqonnaarra ture jedheera.
Qacceen sanyii dhukkubni busaa akkamiin hamaa akka ta'e agarsiise
Hiinis qoranicha qarshii kootiinan hojjedhee jedheera.
Hiin daa'imman lakkuu ''Luuluu'' fi ''Naanaa' jedhaman qacccee sanyii isaanii jijjire fayyaa dhalachuu isaanii beeksiseera. Cimdooliin kudha saddeet- Abbaan kan HIV dhiiga keessa qabu fi haati kan hin qabne yaalii kana fudhachuuf galmaa'aniiru. Jedheera.
Goodayyaa suuraa Saayintistichi 'daa'imni garaa keessa jiru' ammas kan qacceen sanyii gulaaleera jedheera.
Saayintistichi 'daa'imni garaa keessa jiru' ammas kan qacceen sanyii gulaaleera jedheera.
Isa waa'ee qaccee sanyii daa'imman gulaae jedhe fudhanneerra. Garuusaayintistichi akkaataa qaccee sanyii kana akkatti gulaalu feccee tokko tokko himuu qaba kana immoo hin goone kanaaf isa amanuun nu rakkisa. Ragaa inni dhiyyeesu murtaa'aa dha, namoota hojii koo ilaalaniiru jedhus maqaa dhahuu hin fedhu jedhaniiru.
Meeshaan qaccee sanyii ittiin gulaalan kan Crispr jedhamu haaraa miti kan bara 2012 kalaqame dha.
Meeshichi maqasii molakilaarawaa fayyadamee qaccee sanyii keessaa kutuun kanbiraatii bakka buusa.
Qaccee sanyii gulaaluun dhukkuba sanyiidhaan daddarbu hambisuuf fayyada kunis sanyii sadarkaa micireetti jiru haquun yookiin geeddaruun raawwatama.
Icciitii qaccee sanyii ilillii Rooz
Ogeessonni gama biraan gulaalliin kuni labata sanyii gulaalame irraa dhalatu miidhuu danda'a jedhu.
Qorannoon saayintist Hiin beektota baayyeen qeeqamaa jira.
Saayintistoonni Chaayinaa baayyeen qorannoosaa miidiyaa hawaasummaarratti balaalefachuun mallattooo walitti qabaa jiru.
Seera Chaayinaatiin dhorkaa tahuusaa ministeerri itti aanaa Saayinsiifi Teekinolojii Xu Nanping dubbataniiru.